आजबाट सकियो ७४ मा निवार्चित जनप्रतिनिधीको कार्यकाल, मतपरिणाम नआएका पालिका खाली, के भन्छन नवनिर्वाचित ? « Yoho Khabar
काठमाडौँ — वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आजबाट सकिदै छ । कार्यभार सम्हाल्नुअघि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शपथ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मतपरिणाम आएका पालिकाका जनप्रनिनिधिहरुले सथप ग्रहण गरका छन । उनीहरुको कार्यकाल जेठ ६ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । के छन त नवनिर्वाचितहरुका चुनौतीहरु ?
२०७४ सालको वैशाख, असार र असोजमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भए पनि सबैको कार्यकाल आज जेठ ५ बाट सकिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएसंगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले कार्यभार सम्हालेका छन । कार्यभार सम्हालेको १५ दिनभित्र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यपालिकाको गठनसँगै नयाँ जनप्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो पालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको सात दिनभित्र अध्यक्ष तथा प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोहि प्रावधान अनुसार मतपरिणाम आएका पालिकाका नवनिर्वाचितहरुले सथप ग्रहण गरेका हुन । मतपरिणाम ढिला आए पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि भोलिबाटै सुरु भएको मानिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । कतिपय निर्वाचन परिणाम आएकै स्थानमा समेत सपथ ग्रहण केहि दिन पछि हुने भएपनि पुरानाका विदाई र नयाँको स्वागतमा कार्यक्रमहरु आयोजना भएका छन । योसंगै उत्साहका साथ नेतृत्वमा पुगेकाहरुले गर्न काम र देखाउने सक्रियता कस्तो रहँला भन्ने चासो सुरु भएको छ भने नवनिर्वाचितहरुले पनि निर्वाचनमा गरिएका बाचाअनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन ।
देश संघियतामा गएपश्चात दोश्रो पटक भएको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा पुरानै अनुहार पनि दोहोरिएका छन । भक्तपुरमा त पुरानै अनुहार दोहोरिदाँ अन्य दलको जमानत समेत जफत भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेका कारण दोहोरिनेहरुले वाँकि कार्यकाल जारी तर बाँकि रहेका कार्यकाल पुरा गर्न आफू आएको बताएका छन । स्थानीय तह भ्रष्ट्रचारको अखडा बनेको आरोपका वीच पनि राम्रो काम गरेर जनताको मन जितेर दोहोरिएकाहरुले पनि यो कार्यकाल अझ सफल बनाउने बाँचा गरको छन ।
यता पूर्व जनप्रतिनिधिहरु भने शीर्ष नेतृत्व र केन्द्रमा रहेकाहरुले संघियताको सहि अर्थ नबुझेका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई काम गर्न चुनौती रहेको बताउछन । विस बर्षपछि निर्वाचित बनेर आएका आफूहरुले केहि भौतिक र केहि नितिगत काम गरे पनि अन्योलमै लामो समय गुजारेको उनीहरुको भनाई छ । यो दृष्टिबाट अहिले निर्वाचितलाई केहि सहज भएपनि आफ्नो चुनौती र अवसर कसरी प्रयोग गर्छन त्यसले संघियता कार्यान्वयको आधार कोर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
विभिन्न समस्याका बावजुत पनि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ अनुहार प्रति आम मतदाताको आशा भरोसा र अपेक्षा पनि धेरै छन । विगतका सफललाई छान्ने र असफललाई गोड्ने तथा आशा लाग्दा नयाँ अनुहारमाथि उभार नै ल्याउने मतको प्रकृतीले परिर्वन र विकासको ग्यारेन्टी खोज्ने नागरिकको प्रयास देखिएको छ । तर जनप्रतिनिधिका लागि समेत परिक्षणको आधार रहने उनीहरु कति खरो उत्रिन्छन त्यो भने समयले नै उत्तर दिने छ ।